Mero puti chikeko : को को सँग चिकिएन - ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा - Nepali Sex Story
Home mero puti chikeko Nepali Sex Story in Nepali Nepali Sex With Teacher Nepali Youn Katha चिकेको कथा यौन कथा सेक्सी कथा Mero puti chikeko : को को सँग चिकिएन - ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा
सर र म कोठामा वेलुकी रमाइलो गर्ने क्रममा तैयारी खानेकुरा देखि सबै सामान लिएर आयौं र कोठामा बस्यौं । हामी दुबै जना फ्रेस हुने भन्दै वाथरुम मा गयौं, त्यो विवेकले खाट मुनी वाट हेरी रहेको रहेछ । हामी दुवै जना एकैपटक वाथरुम मा गएको देखेपछि विवेकको शंका वास्तविकता मा परिणत हुने लक्ष्यण देखेछ । वाथरुम वाट वाहिर आउन हामीलाई करिव आधा घण्टा लाग्यो, किनकी वाथरुम मै एक चिकाइ भ्याइसकेको थियौं, फ्रेस हुने क्रममा । त्यस पछि हामी कोठा मा आयौं र वियर र प्याकिङ्ग खानेकुरा झिकेर खान थाल्यौं । हामीले करिव करिव ६ वोटल जति वियर खाइसकेका थियौं, मलाइ साह्रै पिसाव लाग्यो । मलाइ अलि अलि लागी सकेको थियो, त्यहि भएर म अलि अश्लिल शव्द वोल्न थालिसकेको थिएँ । मलाइ लागेको वेलामा अश्लिल शव्द वोल्न पनि रमाइलो लाग्ने भैसकेको अर्थात वानी परि सकेको थियो । मेघ सरले पनि लागे पछि अश्लिल शव्द हल्का वोल्नु हुन्थ्यो । मैले म पिसाव फेर्न जान्छु संगै जाने, अनि फेरी वाथरुम मा अगि जस्तै चिक्ने भनेर मेघ सरलाइ सोधेको - म जान्न, तँ जा मुतेर आइज ! पुति वाट पानि झार्न मन लागेको छ भने हातले चलाएर झारेर आइज, अनि सावुन पानि ले राम्रो संग पखालेर आइज। आज मलाइ साह्रै तेरो पुति चाट्न मन लागेको छ भनेर अलि मातिएको भाषा मा वोल्न थाल्नु भयो ।
म वाथरुम गएँ मुते, साँच्चै मलाइ पानी फाल्न मन लाग्यो र मैले पानी फाल्ने विचार गरेर वाथरुमको ह्याण्ड सावर मेरो पुतिमा घुसार्न लागें । करिव १५ मिनेट जति घुसारेर हातले माडे पछि मैले मेरो पुती सावुन पानीले राम्ररी धोएर कोठामा आएँ । मलाइ त वियरले छोड्न लागे जस्तो छ सर भने । मेघ सरले मुतेर आए पछि यस्तै हुन्छ, पख म पनि मुतेर आउछु अनि फेरी खानुपर्छ वियर भन्न थाल्नु भयो । सर वाथरुम वाट आउनु भयो र फेरी हामी वियर खान थाल्यौं । वियर खाँदा खाँदा मलाइ वढि अस्लिल शव्द वोल्न मन लाग्यो र सरलाइ - सर अव चिक्ने होइन ? यो मुडमा चिक्नु पर्छ क्या भने । सरले पनि ल ल चिक्ने हो भन्न थाल्नु भयो र के छ र! आज त हामी रातभर चिक्नु पर्छ भनेर मेरो नजिक आएर टासिएर बस्नु भयो । मैले सरको पाइण्ट खोलें र सर को लाडो कट्टु वाट वाहिर निकाले । यो कट्टु अनि मेरो माथीको सवै लुगा फुकालिदे भनेर सरले भन्नु भयो, मैले सवै त्यसै गरें । सरले तेरो पनि सवै लुगा फुकाल भन्नुभयो र मेरोपनि सवै लुगा फुकालें । हामी दुवै जना निर्वस्त्र भयौं र मैले सर को लाडो चुस्न थाले । मैले वेला वेला भन्दै थिए, त्यो वियर भन्दा त यो लाडो चुसाई को स्वाद पो रमाइलो छ सर भनें । धेरै वेर सर को लाडो चुसें तर सरको उत्तेजना नै आएन, सायद वियर धेरै भएर होला ।
Mero puti chikeko Nepali Sex Story
मलाइ त साह्रै चिक्न मन लागिसकेको थियो । अनि सर लाई भनें - सर मैले अघि मुतेर आउँदा मेरो पुति राम्रो संग सावुन पानीले धोएर आएको छु । चाट्छु भन्नु भएको होइन ल चाट्नु ! भनेर पुति सरको मुख तिर राखें ।
सरले मोरी पुति चाट्दा साह्रै रमाइलो मान्छे, आज मजाले सफा गरिदिन्छु तिम्रो कुवा । यस्तो रमाइलो त मेरो स्वास्नी ले पनि गर्दैन । यस्तो रमाइलो मेरो घरको स्वास्नीले गर्ने भए म किन तँ का आउथेर ! वेला वेलामा पुतिवाट मुख निकाल्दै यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मेरो श्रीमान ले पनि यसरी मेरो पुति चाट्न दिने र लाडो चुस्न दिने भए त म किन यस्तो हुन्थें र ! भनेर मजा मानि मानि भन्दै थिएँ ।
Latest Nepali Sex Stories : को को सँग चिकिएन - ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा
तर मलाइ मेरो श्रीमान ले मेरो पुति नचाटेर वा मलाइ लाडो चुस्न नदिएर यस्तो चिकामारी गर्दै हिड्ने गरेको होइन । मलाई पहिलो पटक दुर्गा वहादुर सरले यो वानी लगाएकोले धेरै प्रकारको लाडो चाहार्ने वानी परेको हो । सर ले धेरै समय सम्म मेरो पुति अरु दिन भन्दा रमाइलो गरेर चाटिरहनु भयो, मेरो पुति ले धेरै पानी फाल्न थालेको थियो । यसपछि मैले सर को लाडो पनि चुस्न थालें, विस्तारै सर को लाडोले आफ्नो पुर्ण आकार लियो । त्यसपछि सरले मेरो हिलाम्य खेतरुपी पुति मा धानको विरुवा रुपी लाडो छिराएर लामो समय सम्म भित्र-वाहिर गर्नु भयो । वियर को नशाका कारण होकी साह्रै लामो समय लगाउनु भयो सरले । करिव ११ वजी सकेको थियो, सरको लाडोले हिलो माथी झन हिलो थप्यो, त्यसपछि सर मरो माथी नै लादो ननिकाली सुत्नु भयो । हामीले वेडमा सेक्स नगरि वियर खाएको सुरमा भुइमा नै चिकेको थियौं, मैले सरलाइ उठाएर माथी सुताउन सकिन र म पनि सर संगै केहिवेर पछि वत्ति निभाएर सुतें भुइमै । हामीले वत्तिवालेर नै चिकेका थियौं ।
mero puti chikeko Nepali Sex Story in Nepali Nepali Sex With Teacher Nepali Youn Katha चिकेको कथा यौन कथा सेक्सी कथा
Nepali Sex Katha : म १६ वर्ष पुगेकी तरुनीHello Nepali Youn Katha Readers, बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ ।
पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ – त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्र…